ဗိုလ်ချုပ်ကဆရာကြီးရွှေတိုင်ညွှန်ကိုအချက်အလက်တွေပေးပြီး သီချင်းစပ်ခိုင်းခဲ့တဲ့ ” တပ်မတော် “အတွက်သီချင်းကိုသိလား..?? – Kanaung
ဗိုလ်ချုပ်ကဆရာကြီးရွှေတိုင်ညွှန်ကိုအချက်အလက်တွေပေးပြီး သီချင်းစပ်ခိုင်းခဲ့တဲ့ ” တပ်မတော် “အတွက်သီချင်းကိုသိလား..??
Articles	ဗိုလ်ချုပ်ကဆရာကြီးရွှေတိုင်ညွှန်ကိုအချက်အလက်တွေပေးပြီး သီချင်းစပ်ခိုင်းခဲ့တဲ့ ” တပ်မတော် “အတွက်သီချင်းကိုသိလား..??	Ko Sai
အချိန်ကား1945 …ရန်ကုန်မြို့..ကြည့်မြင်တိုင်..ထီးတန်းလမ်း5လမ်း အိမ်တအိမ်တွင်အိပ်ယာပေါ်လဲလျောင်းလျက်ရှိသောလူမမာတဦးက သီချင်းတပုဒ်ကိုတိုးညင်းသောလေသံလေးဖြင့်သီဆိုပြနေသည်ကို 25နှစ်ရွယ်လူငယ်တဦးကလူနာကပ်ကာလိုက်ရေးလိုက်၊ပြန်ဖတ်ပြ၊ ပြန်ဆိုပြလိုက်ဖြင်သီချင်းတပုဒ်ရေးစပ်ပြီးခဲ့သည်…။
ရေးသားခဲ့သည်သီချင်းသည်တေးသွားဟန်ကလည်းမြန်မာနရီစည်းဖြင့်တီးမလား၊နိုင်ငံတကာတူရိယာဖြင့်တီးမလား၊ဒါမှမဟုတ်စစ်ချီတေး အဖြစ်စစ်ချီဘင်ခရာဖြင့်တီးမလား….မည်သည့်နရီစည်းဝါးဖြင့်တီးပါ စေအဆင်ပြေစွာသီဆိုတီးမှုတ်ရအဆင်ပြေသည်။
ထိုပြောင်မြောက်လှစွာသောတေးသီချင်းကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက အချက်အလက်များပေးခဲ့သည်။မျိုးချစ်ဂီတစာဆိုရွှေတိုင်ညွှန်ကရေး စပ်ကာ၊၀ဏကျော်ထင်(ဦး)စိ်န်မြမောင်ကရေးသားမှတ်တမ်းတင်ပေး ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့ဘူးသည့်စကားတခွန်းကတော့….. တိုင်းပြည်တပြည်မှာတပ်မတော်ရှိမှဖြစ်မယ်။ အင်အားတောင့်တင်းတဲ့တပ်မတော်ဖြစ်ရမယ်။ ဒါပေမဲ့တပ်မတော်ကတိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ဘဲ တိုင်းပြည်အာဏာတပ်မတော်လက်ထဲရောက် ရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံသွားပြီဘဲတဲ့…။
(ဆရာရွှေတိုင်ညွှန်ကထိုသီချင်းကိုနောက်ဆုးံရေးစပ်ပြီး1945 ဖေဖော်ဝါရီ26၊အသက်36နှစ်၊အရွယ်ကောင်းချိန်မှာအဆုတ် ရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။)
ကိုးကား :ခြေခြေမြစ်မြစ်နှစ်နှစ်ကာကာမြန်မာဗဟုသုတ ၁၀၀
Previous Articleထမင်းစားပြီးရှောင်ကြဉ်ရမည့် အချက် ၇ ချက်	Next Articleကွမ်းသီးကို ဖလင်ချွတ်ဆေး၊ ကန့်တို့ဖြင့် ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် စားသုံးသူများ သေဆုံးသည်အထိ အန္တရာယ်ရှိနိုင်	Comments (0)